စကာင်္ပူ မလေးရှားမှာနေတယ် အစားအစာရေမြေကိုသုံးစွဲတယ် ၊ အားပေးတဲ့အချိန်ကျတော့ မြန်မာကိုအားပေးတယ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သံတွဲမြို့တွင် ထပ်မံအကြမ်းဖက်ရန် ဝီရသူ( မဘသဗဟို ) မှ လျှို့ဝှက်ညွှန်ကြား
၂၀၀၈ ခြေဥကိုပြင်ဖို့ နည်းလမ်းရှိသေးလား? »
စကာင်္ပူ မလေးရှားမှာနေတယ် အစားအစာရေမြေကိုသုံးစွဲတယ် ၊ အားပေးတဲ့အချိန်ကျတော့ မြန်မာကိုအားပေးတယ်
မဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူး ဒါပေမဲ့ —===========================
လူဝင်ကြီးကြပ်ရေး နှင့်မှတ်ပုံတင်ဦးစီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီပြောတာ မှတ်မိခဲ့ပေသည် ။”
“မြန်မာပြည်မှာနေတယ် မြန်မာရေကိုသောက်ပြီး မြန်မာနိင်နိငံကို ချစ်ရမှာက နယ်စပ်နေနေ ပြည်တွင်းနေနေ ဘင်္ဂလီဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ဖြစ်ဖြစ် မွစ်စလင်ဖြစ်ဖြစ် ခရစ်ယာန် ဖြစ်ဖြစ် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ရှိရမာဖြစ်တယ် လို့ ကျန်တော်မြင်တယ်””” ခုဟာ မြန်မာအလံလည်းအလေးမပြုဘူး ၊ နိင်ငံတော်သီချင်းလဲ မဆိုဘူး ၊ တိုင်းပြည်နဲ့ပက်သက်လာရင်လည်း မြန်မာဘက်က ရပ်တည်မူမရှိတဲ့တချို့သော ဘင်္ဂလီတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတွေ့ရတယ် ” ဦးခင်ရီပြောခဲ့ပေသည်
သူက မွစ်စလင် အားလုံးကိုမပြောပဲ တချို့ကိုပြောထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ အားလုံးကိုလည်း ပြောလို့မရပါ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်တွေရဲ့ နိင်ငံအပေါ် သစ္စာ ရှိမူဟာ သမိုင်းတွင်တွေ့နေတုန်းပါပဲ။
Good questions! Today onwards I will stand up and salute Malay flag if the Nagaraku play. TQ I will start now.
မနေ့က စကာင်္ပူနိင်ငံမှာမြန်မာနဲ့ အိမ်ရှင်စကာင်္ပူတို့ ဘောလုံးကန်ကြတယ်၊ မြန်မာရူံးနိပ့်ခဲ့တယ် ၊မြန်မာဘက် ပရိတ်သတ်တွေက မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တယ် ။ စကာင်္ပူမှာနေတယ် စကာင်္ပူအစားအစာရေမြေကိုသုံးစွဲတယ် ၊ အားပေးတဲ့အချိန်ကျတော့ မြန်မာကိုအားပေးတယ် ။ ၀န်ကြီးခင်ရီပြောသလိုနဲ့ဆို ဒီနိင်ငံမှာနေပြီး ဒီနိင်ငံ့ရေသောက်ပြီး ဒီနိင်ငံကိုတော့လျစ်လျူမရှုသင့်ဘူးဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလား။ စကာင်္ပူအမျိုးသားနေ့တွင်ရော စကာင်္ပူမှာနေတဲ့ မြန်မာတွေ နိင်ငံတော်သီချင်းဆိုလို့လား ? အလေးပြုလားလို့ ? မေးပါရစေ ။ စကာင်္ပူမှာ မြန်မာပြည်သား ၁သန်းဝန်ကျင်လောက်နေထိုင်ပြီး နိင်ငံသားခံယူထားသူဟာ သုံးပုံတစ်ပုံရှိနေတယ်။စကာင်္ပူနိင်ငံသားခံယူပြီး အားပေးတဲ့အချိန်ကျတော့ မြန်မာကိုအားပေးတယ် ။ မြန်မာပြည်က မွစ်စလင်တွေက မြန်မာနဲ့မလေးရှား ဘောလုံးကန်ရင်တောင် မြန်မာပဲအားပေးတယ် ၊ မလေးဖြစ်လျက်နဲ့ဘာသာတူနေပါစေ ၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုအားပေးနေကြတာအမှန်ပဲ ။ အဲ့ဒီနိင်ငံမှာနေပြီး မွှေးပြီးအဲ့ဒီနိင်ငံရဲ့ အလံကိုတော့ အလေးမပြုတာ ကို ပြည်တွင်းနေအစ္စလာမ်နှင့်စကာင်္ပူနိင်ငံသား မြန်မာလူမျိုး နိူင်းယှဉ်ပြစရာတောင်မလိုဘူး ။မလေးရှားမှာနေ မလေးနိင်ငံသားခံယူထား မလေးရေကိုသောက်ပြီး မလေးရှားနိင်ငံတော်အလံကို ဘယ်သူအလေးပြုဘူးလဲ ၊ မလေးရှားယဉ်ကျေးမူကို ၀တ္တရားအရ ဘယ်မြန်မာက ဆောင်ရွက်မူတွင်ပါဝင်ပေးသလဲ၊ မလေးနိင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တခုအနေနဲ့ ဘယ်မြန်မာလူမျိုးက ဘာဝင်ခဲ့ဘူးလဲ ။ထိုင်းမှာနေ ထိုင်းနိင်ငံသားခံယူ ထိုင်းရေမြေအစားကိုစား ထိုင်းဘုရင် ဘုမိဘော အဒူရာဒက်ကိုဘယ်မြန်မာက ဂါဝရပြုဘူးလဲ ၊ အဲ့ဒီနိင်ငံမှာတော့နေတယ် အဲ့ဒီနိင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တခုအနေနဲ့ ဘယ်မြန်မာက ပါဝင်ဘူးလဲ ၊ ဒါကိုအပြန်အလှန်နားလည် ၊ ကိုယ်က သူများကို လက်ညိုးအရင်မထိုးနဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင်ကမှန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် ။ခိုးဝင် ဘင်္ဂလီ ၊ ခိုးဝင် တရုတ်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင် ထိုင်း မလေးရှားကိုရော မြန်မာလူမျိုးတွေ အားလုံးဗီဇာနဲ့ သွားလို့လား ၊ တ၀က်လောက်က ခိုးဝင်တွေပဲ ၊ တရုတ်ကိုရော ခိုးသွားတဲ့ မြန်မာမရှိလို့လား ။ သူများကိုတော့ သူခိုးပြောမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုတိုင်ကရော သူခိုးမဟုတ်လို့လား စမ်းစစ်ပါ။၁ပက်အလိုက အစိုးရဒုံးနဲ့ပစ်လို့ ကချင်မှာ ၂၃ယောက်သေတယ် ။ တိုက်ပွဲများစွာတွေကြောင့် ကချင် ခရစ်ယာန် ကရင်တွေ ပြေးနေရတယ် ၊ ဒုက္ခ ရောက်နေတယ် ၊ အဲ့ဒီအချိန် တခြားတနေရာကနေ တခြားနိင်ငံက သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ ဝေဒနာကို တွေ့တော့ ဆန္ဒပြတယ် ၊ ကန့်ကွက်တယ် ၊ မြန်မာနိင်ငံမှာနေပြီး မြန်မာပြည်ကို သူတို့ကဘယ်ချစ်နိင်မလဲ ၊ သူ့လူမျိုးတွေကို နိပ့်စက်ခံရတာကိုး ။ မြန်မာပြည်မှာနေပြီး မြန်မာအလံအလေးမပြုတာတောင်မှ မြန်မာအလံကို မီးရိူ့တဲ့ သူကိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ………………….ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အမျိုးကိုကိုယ်ချစ်တက်ကြတာပဲ ၊ အမျိုးချစ်လို့ စကာင်္ပူနိင်ငံသားခံယူတဲ့ မြန်မာတွေ ဒီရေဒီမြေ ကိုမထောက်ပဲ မြန်မာကိုအားပေးမြန်မာကိုချစ်နေကြတာပဲ ၊ အမျိုးချစ်လို့ မြန်မာနိင်ငံမှာမွေးပြီး နေလာခဲ့သည့် ကချင်တွေလည်း သူ့အမျိုးထိတော့မြန်မာ့အလံကိုပါမီးရိူ့ ၊ မြန်မာပြည်မှာနေပြီး ခြေထောက်နဲ့နင်းတာပဲ…..မြန်မာပြည်ကပေးတဲ့ သံယံဇာတကို ယူပြီး ရရှိတဲ့ အဖိုးတန်ကိုတော့မိမိလူမျိုးများနေထိုင်တဲ့ တရုတ်ကို သယ်ယူကြတာရော သူ့အမျိုးသူချစ်လို့ပဲပေါ့။။။၀န်ကြီးခင်ရီစကားကို အားလုံးအတွက်အကောင်အထည်ဖော်စေလိုပါသည်။ ၀န်ကြီးအနေနဲ့ စကားကိုကုန်အောင်မပြောပါနဲ့လို့သတိပေးပါရစေ
Raja Kita, Selamat Bertakhta ،نڬاراكو،
راج كيت، سلامت برتختا My country
The people living united and progressive
May God bestow blessing and happiness
May our ruler haveasuccessful reign
This entry was posted on December 1, 2014 at 10:53 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “စကာင်္ပူ မလေးရှားမှာနေတယ် အစားအစာရေမြေကိုသုံးစွဲတယ် ၊ အားပေးတဲ့အချိန်ကျတော့ မြန်မာကိုအားပေးတယ်”
December 1, 2014 at 11:06 am | Reply
For me…Negaraku is MUCH MORE valuable than Myanmar National Anthem, “Ka Bar Ma Kyae” which is regularly sing by Myanmar Military’s terrorist arm 969 Swarn Arr Shin Ma Ba Thas.
Today onwards I will stand up and salute Malay flag if the Nagaraku play. TQ I will start now.